Apple dia mety miasa amin'ny endrika audio Resolution Avo | Vaovao IPhone
Raha misy mampiavaka an'i Apple dia tsy ny dingana diso no tena izy. Miaraka amin'ny fanapahan-kevitra marina kokoa na tsy dia marina, rehefa mandray dingana ny orinasa dia satria mitady tanjona mazava izy ireo, ary toa mihetsika ny tsaho milaza fa mahavita izany raha tsy misy ny kapila finday amin'ny iPhone 7 sy 7 Plus manaraka. dikany Ny Cupertino dia toa niasa amina endrika endrika feo am-peo avo, izay tsy mifanaraka amin'ny famoahana headphone analog. Ity endrika vaovao misy kalitao avo lenta kokoa noho ireo izay ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny serivisy mozika streaming dia mety ho iray amin'ireo fananana lehibe hampiroborobo ny headphones vaovao miaraka amin'ny fifandraisana Lightning fa tsikelikely dia mahatratra ny tsena.
Raha ny loharanom-baovao isan-karazany akaiky an'i Apple, izay aseho amin'ny Portable Audio Festival amin'ny taona 2015, ny orinasa dia mamolavola endrika haino aman-jery High Resolution hatramin'ny 96kHz sy 24bits izay hanomboka amin'ny 2016. Ny fifandraisana misy ny Jiro sy ny iOS 9 dia mifanaraka. miaraka amina feo hatramin'ny 192kHz sy 24bits.
Toa efa nandefa ny fampahalalana rehetra tamin'ny mpanamboatra kojakoja audio i Apple ary efa nanomana ny vokatr'izy ireo izy ireo hanomana azy ireo rehefa mandefa ireo fitaovana vaovao mifanaraka amin'ity audio ity i Apple. Ho fanampin'izay, ilay iPhone 7 sy 7 Plus vaovao, izay ho fitaovana voalohany natomboka tsy nisy «headphone jack»., efa nampidirin'izy ireo tamin'ny telefaona mifandraika amin'ny tselatra ny headphones, dia tombantombana mihitsy aza fa mety ho headphones miaraka amin'ny marika Beats izy ireo, fa tsy hitazona ireo EarPods izay ampidirin'i Apple ao anaty boaty.
Ny fanolorana serivisy fandefasana mozika amin'ny High Resolution dia teboka iray manohana an'i Apple Music izay manavaka azy amin'ny serivisy fifaninanana, indrindra ny Spotify. Ho fanampin'izay, Apple dia miara-miasa amin'ireo mpanakanto isan-karazany hanolotra manokana ny atiny, toa ny raharaha Taylor Swift androany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Music » Apple dia mety miasa amin'ny endrika audio Resolution Avo
Ahoana ny fomba hanampiana ny menio fizarana iOS amin'ny fampiharana YouTube